၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Xperia Z စီးရီးအတွက် Lollipop | Androidsis
အတည်ပြုပြီးပါက Sony သည်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Xperia Z စီးရီးအတွက် Lollipop update ကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်
Francisco Ruiz | | HTC က, NOTICIAS, Sony က, Android ဗားရှင်း
ဒါဟာကတည်းကခဏဖြစ်ခဲ့သည် Sony က သူအစီရင်ခံတင်ပြ Xperia Z လို့ခေါ်တဲ့စီးရီးတွေရဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေအကုန်လုံးကိုတရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်မယ် ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတရားဝင်၌သင်ကဆက်သွယ်ပါ Androidsisမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့ဖြန့်ကျက်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိရသေးသော်လည်း။
အမှန်မှာယခုတရားဝင်ဖြစ်သည် Mike fasulo၏ CEO နှင့် COO Sony အီလက်ထရောနစ်, တရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အတွက်အတည်ပြုကြလိမ့်မယ် ကို CES 2015 တစ်များအတွက်စီစဉ်ထားအချိန်ဇယားကိုAndroid 5.0 Lollipop ကို Sony ၏ထူထောင်ထားသော Xperia Z အကွာအဝေးအတွက်တရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း.
၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင်တစ်ချိန်တည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော CES 2015 တွင်ကြေငြာချက်အပြင် ဆိုနီမိုဘိုင်းသတင်းတွစ်တာအကောင့် ၎င်းသည်၎င်း၏အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်စစ်ဆင်ရေးဒါရိုက်တာတို့၏ပြောဆိုချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးလာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်နေရာချထားမှုကိုစတင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
တရားဝင် Android 5.0 Lollipop ရောင်းချမှုသည် Sony ၏ Xperia Z အမျိုးအစားနှင့်မည်သို့တူမည်နည်း။
ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ တရား ၀ င်အတည်မပြုရသေးသော်လည်း ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလနောက်လတွင်သုံးပတ်မျှသာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ OTA Android 5.0 တရားဝင် Sony Lollipop Xperia Z3 နှင့် Sony Xperia Z2 မော်ဒယ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အထက်ဖော်ပြပါဖေဖော်ဝါရီလလတွင်ဂျပန်နိုင်ငံစုံ၏ဤဆိပ်ကမ်းများသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလက်ခံသင့်သည် Android Lollipop ၀ န်ဆောင်မှု ၎င်း၏ခေတ်တွင်နိုင်ငံစုံကကတိပေးထားသည့်အတိုင်းကျန် Xperia Z အကွာအဝေးနှင့်အတူတုန်လှုပ်သွားစေရန်
၂၀၁၅ ခုနှစ်Aprilပြီလလယ်သို့မဟုတ်မေလအစတွင်အရာအားလုံးအတိုင်းအတာအတိုင်းသာသွားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်Sony Xperia Z စီးရီးအတွက် Android 5.0 Lollipop ကိုတရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ၎င်းသည်အောင်မြင်စွာရပ်တန့်သွားသင့်ပြီးတစ်ချိန်ကဆိုနီ၏အားကိုးအားထားပြုခဲ့ကြသောဝယ်ယူသူများအတွက်စျေးကြီးမားသောကတိက ၀ တ်နှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြီး၎င်းကိုတန်ဖိုးကြီးသောဤစမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များထဲမှတစ်ခုအားဝယ်ယူခဲ့သည်။ ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » အတည်ပြုပြီးပါက Sony သည်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Xperia Z စီးရီးအတွက် Lollipop update ကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်
esmentar ဆိုတာဘာလဲ အရသာပူစီနံ? 😉
Esmentar ဟာကက်သလစ်ဘာသာ ၀ င်ဖြစ်ပြီးတခါတရံငါ့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီးဖော်ပြဖို့လိုလာတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကုမ္ပဏီမိုဘိုင်းအတွက်တစ်ခုခုသိလား။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်၌ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည် Vodafone Spain မှ Xperia Z ရှိသည်။
EaseUs Coolphone-Cool Battery ဖြင့်သင်၏ Android အပူချိန်ကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်မည်နည်း